DAAWO:Madaxweyne Denni oo awood sheegtay, Shakhsigii badali lahaa Dhoobo oo diyaar ah & Qorshaha Madaxtooyada oo….
GAROWE(P-TIMES)- Kadib markii maanta xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ay xilka ka xayuubiyeen gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo ay mooshin ka keentay madaxtooyadu ayaa waxaa ka socda magaalada Garowe qorshayaal kala duwan oo ay wadaan madaxtooyada iyo xubno kaleba.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi oo haatan danaynaya sidii uu ku heli lahaa gudoomiye badala Dhoobo Daareed oo isna u fududeeya arimaha kaga xidhna Baarlamaanka ayaa qaar kamid ah masuuliyiinta ugu dhow kala tashanaya shakhsigii badali lahaa Dhoobo iyo mowqifka madaxtooyada ee ku aadan Baarlamaanka Puntland.
Mr. Denni oo dadaal xoogan u bixinaya hirgelinta qorshayaal badan oo kaga xidhan xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ku jaah wareersan kala doorashada xildhibaano uu doonayo in midkood uu ka dhigo gudoonka Baarlamaanka.
Sidoo kale waxaa iyaguna dhinac socda dadaal madaxtooyada qorshayaal lidi ku ah kuwa madaxtooyada oo ay wadaan xubno kala duwan oo doonaya in gudoonka Baarlamaanku uu noqdo qof saamayn xoogan ku leh deegaanada Puntland, waxaana madaxweyne Denni ay hor dhigeen qaar kamdi ah saaxiibadiisa ugu dhow liis uu ka kala xulanayo shakhsiga u noqon doona madaxweynaha Afarta sano ee soo socota gudoonka Baarlamaanka.
Saddex kamid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Sanaag ayaa loo saadaalinayaa in ay ku kulamaan loolanka adag ee doorashada gudoonka Baarlamaanka kuwaas oo kala ah C/Jamaal Cismaan Maxamed, Abwaan C/rashiid Yuusuf Jibriil iyo Cali Axmed Saalax ( Cali Dhahar), waxaaana ay sheegayaan warar hoose oo ay heshay Puntlandtimes.com in madaxweyne Denni ay ku adag tahay doorashada Abwaan C/rashiid Yuusuf Jibriil oo kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka Puntland sababo la xidhiidha xukuumaddii hore ee madaxweyne Gaas oo uu lasoo shaqeeyey, isagoona Denni aaminsan in uu caqabad ku noqon doono Abwaan Jibriil maadaama uu wax badan ka fahansan yahay mashaariicda lays dhaaf dhaafinayo iyo danta kaga xidhnaan karta xili walba madaxweynaha Baarlamaanka Puntland taas badalkeedna waxa uu u muuqdaa Denni mid ka maarmi doona Abwaan C/rashiid Yuusuf Jibriil.
C/Jamaal Cismaan Maxamed ayaa kamid ah raga ugu cad cad ee loo saadaalinayo qabashada xilka gudoonka Baarlamaanka Puntland sidoo kalena kamid ahaa musharaxiintii u soo istaagtay doorashada kursiga ugu sareeya Baarlamaanka ayaa waxaa isna la sheegay in uusan wanaagsanayn xidhiidhka ka dhaxeeya xildhibaanka iyo madaxweyne Denni maadaama dagaal adag oo siyaasadeed uu ka dhaxeeyo labadooda sidoo kalena laga yaabo in ay adkaato fududaynta mashaariicda Denni damacsan yahay in ay u meel mariyaan xildhibaanada Baarlamaanka, waxaana C/Jamaal uu banaanka ka ahaan doonaa qorshaha madaxtooyada.
Xildhibaan Cali Axmed Saalax (Cali Dhahar) oo ahaa gudoomiyihii gudida doorashadii madaxtinimada Puntland ee sanadkani ayaa isna ku jira liiska madaxtooyada, waxaana la sheegay Mr. Dhahar in uu kamid yahay shakhsiyaadka ugu dhow madaxtooyada taas oo macquul gal ka dhigi karta in uu noqdo gudoonka Baarlamaanka Puntland.
Cali Axmed Saalax (Cali Dhahar) ayaa la aamisan yahay in uu kamid yahay shakhsiyaadka ugu dhow madaxweyne Denni ee kamid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Sanaag, waxaana eegnaa dadaalka madaxtooyada iyo gudoonka cusub oo doorashadiisu ay dhici doonto Khamiista soo socota oo taariikhdu ku beegan tahay 14-ka bisha November sida uu maanta gollaha ka dhex sheegay gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Puntland.
Dhanka kale gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka C/xakiin Dhoobo Daareed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uusan aqbalin go’aankii maanta kasoo baxay xildhibaanada Baarlamaanka Puntland.
Waxa uuna sheegay in af duub lagu sameeyey Baarlamaanka Puntland oo shakhsiyaad gaar ah ay maamulayaan siday doonaana ka yeelayaan xildhibaanada, isagoona sheegay in madaxtooyadu ay ku bixisay lacag gaadhaysa 20 Kun oo Dollar mid xildhibaankasta si mooshinka looga keenay uu u hirgalo.
Waxa uu carabta ku dhuftay in uu yahay gudoomiyaha saxda ah ee Baarlamaanka sifo sharci ahna xiliga looga qaadi karo balse xil ka qaadistiisii maanta loo maray wado khaldan oo aan wanaagsanayn.